Marka aad isticmaalaysid qalabka Apple ah, waxaad ka heli doontaa in nuxurka uu si toos ah synced mar walba oo aad u xidhmi doontaa PC. Waxaad ka heli doontaa gurmad ah ee files aad ku Lugood aad. Mararka qaarkood, waxaad ka heli kartaa baahida loo qabo in Macdan aad gurmad Lugood si aad isku soo celin karaa in qalab aad.
Haddii aad raadinayso siyaabo by kaas oo aad soo saaro kartaa gurmad ka Lugood aad, waxaan dooneynaa inaan ku qor hababka muhiim ah iyo talaabooyinka halkan waxaan ku. Halkan waxa ku jira saddex ka mid ah qalabka ugu wanaagsan oo iman kartaa haan marka saarida gurmad ka Lugood.
1.Wondershare Dr.Fone Wixii macruufka
Dr. Fone ee macruufka fog yahay mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan oo aad isticmaali karto aawadood soo saarida aad gurmad ka Lugood by. Waxaa la iman badan oo muuqaalada cajiib ah, kuwaas oo qaarkood waa sida soo socota.
Waxa ay taageertaa in ka badan 16 qaabab file ka mid yihiin Xiriirada, Messages, wac taariikhda, Photo Stream, iwm
Waxaad ku eegaan karo files ka hor soo celinta.
Waxay kaa caawinaysaa in si qamaar ah aaladaha Apple oo ku xayiran yihiin dhibaatada logo Apple.
Waxay kaa caawinaysaa in dib u soo celinta qalabka la OS khaldan.
Si loo soo saaro faylasha gurmad, halkan waa tallaabooyinka muhiimka ah oo aad u baahan tahay in la raaco.
Burcad Dr. Wondershare ka Fone ee macruufka aad kombuutarka.
Connect qalab Apple oo sug barnaamijka in la aqoonsado qalab aad.
Riix 'ka soo kabsado file kaabta Lugood' doorasho.
Barnaamijka waxaa si toos ah loo ogaado oo dhan files gurmad oo ay joogaan kombiyuutarka oo wuxuu muujin doonaa liiska.
Hubi file gurmad oo aad rabto in aad soo celiso.
Hadda ka dhacay on "scan bilowga '
Sug in muddo ah oo ha barnaamijka file gurmad Scan.
Guudmar files iyo doorto midda aad rabto in aad soo kabsado.
Waxaad shaandhayn karo natiijada doorataa qaybo gaar ka dhinaca bidix.
Riix 'kabsado' button iyo wadooyinka soo galo meesha aad rabto in aad badbaadin ka kooban.
Kuwaasu waa fudud oo si sahlan loo raac tallaabooyinkan oo kaa caawin doona inaad Macdan files xogta iyo dib u soo ceshano xogta aad laga badiyay. Waxaa sugan in, haddii aad raadinayso in ay ku qaataan qaar ka mid ah lacag si aad u hesho software adag, tani waxay noqon doontaa doorashada ugu fiican ee sida version ku bixisay waxaa ka buuxa ah qaababka ugu fiican oo aad weydiin kartaa.
Waa aalad oo waxaa ka buuxa wax badan oo wanaagsan muuqaalada. Codsigan uu baaritaanku qalab Apple oo xittaa ku siin karaan faahfaahinta Lugood aad files gurmad oo ku iman kartaa haan ee soo celinta xog lumay aad. Version ayaa lacag la'aan ah ayaa la dhaafi karin daran sida ay u ogolaan kartaa in aad soo saaro wax yar uun files. Si aad u samayso faa'iidada ugu badan ee this qalab, waxaa lagama maarmaan ah in uu noqonayaa doorato version bixisay.
Tallaabooyinka ah in la raaco
Connect qalab Apple aad PC
Burcad kabashada xogta iSkysoft iPhone
Ka dooro 'ka soo kabsado gurmad Lugood' doorasho
Barnaamijka ayaa iskaan doonaa oo lagu ogaado oo dhan files gurmad oo waa hadiyad aad kombuutarka
Waxaad heli doontaa liiska dhammaan faylasha gurmad
Dooro gurmad ah oo aad rabto in aad soo saaro
Riix 'Start Scan'
Waxaad ka heli doontaa liiska faylasha xogta kuwaas oo qayb ka mid ah gurmad ah
Dooro faylasha aad rabto in la soo celiyo oo ka dhacay 'Ladnaansho'
Kuwani waa tallaabooyinka ay sahlan tahay in la raaco aawadood oo gurmad soo saarida ka Lugood aad.
Tani waa qalab kale oo loo isticmaali karaa aawadood soo saarida aad files gurmad ka Lugood. Waxa ay taageertaa macruufka gurmad u iPhone, iPad iyo iPod xataa taabashada iyo sidoo. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad iskaan iyo dhirta waxa ku jira qalab Apple oo ay taageerto kala duwan oo qaabab kala duwan iyo sidoo kale. mar kale, maxkamadda waxay bixisaa lacag la'aan ah qaababka aad u yar oo ku guuldareysan doonaan inay u adeegaan aad u baahan tahay. Si loo furo qaababka ugu, waa in aad doorato version bixisay oo waxaa jira doorashooyin fiican u bixisay lagu daydo.
Halkan waxa ku jira talaabooyin aad u baahan tahay in la raaco aawadood soo saarida hayaan ka.
Burcad software AnyTrans aad kombuutarka
Connect qalab Apple inay PC
Marka qalabka ayaa aqoonsaday software ah, hadda ka jaftaa on 'hayaan'.
Waxaad ka heli doontaa liiska hayaan kala duwan kuwaas oo ku yiil jooga Lugood aad.
Dooro gurmad aad rabto in la soo celiyo.
Riix waxyaabaha gaar ah oo aad rabtid in aad soo celin sida farriimaha, xiriirada iyo in ka badan.
Soo Celinta waxyaabaha aad doonayso.
Kuwani waa tallaabooyinka fudud oo kuu ogolaanaysaa inaad soo saaro files gurmad.
Isbarbar ah saddexda barnaamij-
Halbeegyada iSkysoft AnyTrans Wondershare Dr.Fone Ee macruufka
Kharashka Free version soo kaban karto, waxyaabaha yar Maxkamad Free leh oo xadidan
Maxkamad Free iyo version bixisay liiska dhammeystiran.
Speed ​​hawlgalka Fast Celceliska Sida dhaqsaha badan
Qaabab File Taageerada 12 noocyada kala duwan ee qaabab file Taageerada ku dhowaad dhammaan qaabab file
Taageerada ku dhowaad dhammaan noocyada kala duwan ee qaabab file
> Resource > Lugood > Top 3 Lugood shawladda kaabta 2015